Inqubomgomo Yobumfihlo - Senziwe eSpain
Kuthunyelwe Kwi 30 Novemba, 2018 15 Januwari, 2019 By HB
Idilesi yewebsite yethu: https: //wearemadeinspain.com.
Ziziphi iinkcukacha zobuqu esiziqokeleyo kunye nesizathu sokuba siqokelele
Xa iindwendwe ushiye izimvo kwi-website, siqokelela iinkcukacha eboniswe kwi ifomu lempendulo, kwakunye IP idilesi kunye umsebenzisi ibhrawuza arhente umtya umtyeleli ukuze sincede ukubona spam.
Ikhonkco engaziwa edalwe kwidilesi yakho ye-imeyile (ebizwa ngokuba yi-hash) inokunikezelwa kwiNkonzo yeGravatar ukubona ukuba uyayisebenzisa. Umgaqo-bucala wenkonzo yeGravatar ikhona apha: https://automattic.com/privacy/. Emva kokuvunywa kwamagqabaza akho, umfanekiso wesiprofayili yakho ibonakala kuluntu kumxholo weengxelo zakho.
Ukuba ulayisha imifanekiso kwiwebhu kufuneka ubalekele ukulayisha imifanekiso eneenkcukacha zendawo (GPS EXIF) ifakiwe. Abaveleli kwiwebhu banokukhuphela kwaye bakhuphe nayiphi na idatha yendawo kwimifanekiso yewebhu.
Ukuba ushiya izimvo kwiziko lethu ungakhetha ukugcina igama lakho, idilesi ye-imeyile kunye newebhu kwi-cookies. Oku kukulungelelanisa, ngoko akudingeki ukuba uzalise kwakhona idatha yakho xa ushiya elinye igalelo. Ezi khukhi ziza kudlula unyaka.
Ukuba unayo i-akhawunti kwaye udibanisa kule sayithi, siya kufaka i-cookie yesikhashana ukujonga ukuba isiphequluli sakho samkela ikhukhi. Le cookie ayinayo idatha yomuntu kwaye isuswa xa isiphequluli sivaliwe.
Ukuba uhlela okanye ushicilele i-athikili, i-cookie eyongezelelweyo iya kugcinwa kwisiphequluli sakho. Le cookie ayifaki idatha yedatha kwaye ibonisa nje i-ID yecatshulwa oye walungisa. Iphelelwa emva kwexesha le-1.
Okufakiwe okuvela kwezinye iiwebhusayithi
Amanqaku kule ndawo angabandakanya okuqukethwe okufakiwe (umzekelo, iividiyo, imifanekiso, amanqaku, njl). Umxholo ohlanganisiweyo wezinye iiwebhusayithi uziphatha ngendlela efana neyokuba umvakatye uye watyelela enye iwebhusayithi.
Ezi sayithi ukuqokelela iinkcukacha ngawe ngokusebenzisa iikuki, kuzakulungisa tracking ezongezelelweyo yomntu wesithathu, nokujonga intsebenziswano yakho malunga nalo umxholo eqhagamshelweyo, kuquka umkhondo intsebenziswano yakho enesiqulatho olungisiweyo ukuba une akhawunti kwaye ukuba udityanisiwe kwi web.
Ngubani esabelana ngayo nedatha yakho
Kuze kube nini sigcina idatha yakho
Ukuba ushiya amazwana, izimvo kunye nemethadatha yazo zigcinwa ngonaphakade. Oku kukwazi ukuba sikwazi ukuvuma nokuvuma iimpendulo ezilandelelanayo ngokuzenzekelayo kunokuzigcina kumgca wokumodareyitha.
Kubasebenzisi abhalisa kwiwebhsayithi yethu (ukuba kukho), sigcina nolwazi oluyimfihlo olunikezela kwingxelo yabo yomsebenzisi. Bonke abasebenzisi bangabuka, bahlele okanye basuse ulwazi lwabo lomntu kunini na (ngaphandle kokuba abanakuguqula igama lomsebenzisi). Abalawuli bewebhu banokujonga kwaye bahlele olo lwazi.
Unamalungelo onayo malunga nedatha yakho?
Ukuba unayo i-akhawunti okanye ushiye amazwana kule website, unokucela ukufumana ifayile yokuthumela ngaphandle idatha yakho esinayo malunga nawe, kuquka naluphi na ulwazi olusinike lona. Unokucela ukuba sisuse nayiphi na inkcazelo ebuntwini esinayo malunga nawe. Oku akubandakanyi nayiphi na idatha efunekayo ukuyigcina iinjongo zokuphatha, zomthetho okanye zokhuseleko.
Xa sithumela idatha yakho
Amagqabaza eveleli angabuyekezwa yinkonzo yokufumanisa ugaxekile.
Ulwazi lwakho loqhagamshelwano
YENZIWA ESPAIN SHOP